Ny fahatelo mpikaroka toerana dia mety miady ny fiainana manokana. Araka ny Lowrance (2012) mametraka azy tena fohy: "fiainana manokana tokony hajaina, satria ny olona dia tokony ho hajaina." Privacy, na izany aza, dia malaza tsy hoatr'izany hevitra (Nissenbaum 2010, Ch. 4) , ary araka izany, dia sarotra ny mampiasa rehefa miezaka mba hanao fanapahan-kevitra manokana momba ny fikarohana.
Ny fomba mahazatra ny mieritreritra momba ny fiainana manokana dia-panjakana / miankina Fisampan-droa. Izao fomba fisainana, raha ampahibemaso vaovao dia mora, dia azo ampiasain'ny mpikaroka tsy misy ahiahy mikasika ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana ny olona. Fa ity mety fomba mihazakazaka ho olana. Ohatra, tamin'ny Novambra 2007 Costas Panagopoulos nandefa ny olona rehetra tamin'ny tanàna telo taratasy momba ny ho avy amin'ny fifidianana. Tamin'ny tanàna roa-Monticello, Iowa sy Holland, Michigan-Panagopoulos nampanantena / nandrahona ny hamoaka ny lisitry ny olona izay efa nifidy tao amin'ny gazety. Ao amin'ny tanàna hafa-Ely, Iowa-Panagopoulos nampanantenaina / nandrahona ny hamoaka ny lisitry ny olona izay tsy nifidy tao amin'ny gazety. Ireo fitsaboana natao mba hitarika ny fireharehana sy ny henatra (Panagopoulos 2010) noho ny fihetseham-po ireo efa hita ny fiantraikany taham-pahavitrihana amin'ny fianarana teo aloha (Gerber, Green, and Larimer 2008) . Information hoe iza bato sy izay tsy dia bahoaka any Etazonia; na iza na iza dia afaka mahazo izany. Noho izany, misy afaka milaza fa noho ny fifidianana io vaovao efa-bahoaka, tsy misy olana ny mpikaroka famoahana azy ao amin'ny gazety. Etsy an-danin'izany, zavatra momba ny tohan-kevitra mahatsiaro ratsy ny olona maro.
Rehefa mampiseho ohatra ity, ny vahoaka / tsy miankina loatra Fisampan-droa tapa-doha (boyd and Crawford 2012; Markham and Buchanan 2012) . Ny fomba tsara kokoa mba hieritreritra ny fiainana manokana, ny iray natao indrindra mba hiatrehana olana natsangana ny taona nomerika, dia ny hevitra ny contextual tsy mivadika (Nissenbaum 2010) . Tsy nihevitra-panjakana na tsy miankina vaovao, contextual tsy mivadika dia mifantoka amin'ny ny tsy fampindramam-baovao. Ohatra, ny olona maro ho unbothered ny dokotera raha nizara ny firaketana an-tsoratra ara-pahasalamana amin'ny dokotera hafa, nefa ho faly raha nivarotra izany ny dokotera ihany barotra vaovao ho an'ny orinasa. Noho izany, araka ny Nissenbaum (2010) , "ny zo hanana ny fiainany manokana dia tsy ny zo miafina, na ny zo hifehy, fa ny zo sahaza mikoriana ny mombamomba."
Ny foto-kevitra manan-danja fototra contextual tsy mivadika dia teny manodidina-havana fampahafantarana fenitra (Nissenbaum 2010) . Ireo no fitsipika mifehy ny fampindramam-baovao eo amin'ny toe-javatra manokana, ary izy ireo tapa-kevitra ny telo masontsivana:
Noho izany, rehefa toy ny mpikaroka no hanapa-kevitra raha ny mampiasa tahirin-kevitra tsy nahazoan-dalana dia manampy ny manontany hoe: "ve izany fampiasana mandika teny manodidina-havana fampahafantarana fenitra?" Miverina ho amin'ny raharaha Panagopoulos (2010) , amin'ity tranga ity, manana ivelany mpikaroka mamoaka lisitra ny mpifidy na ny tsy mpifidy ao amin'ny gazety toa azo inoana ny mandika ny fampahafantarana fenitra. Raha ny marina, Panagopoulos tsy nanaraka ny alalan 'ny teny fikasana / fandrahonana, satria manam-pahefana ao an-toerana nanisy fifidianana ny taratasy ho azy sy nandresy lahatra azy fa tsy hevitra tsara (Issenberg 2012, 307) .
Amin'ny toe-javatra hafa, na izany aza, mieritreritra momba ny teny manodidina-havana fampahafantarana fenitra mitaky fiheverana bebe kokoa. Ohatra, andao hiverina any amin'ny mety ny fampiasana finday antso an-tariby hazo ahafahany manara-maso mivezivezy nandritra ny valan'aretina Ebola any Afrika Andrefana tamin'ny 2014, tranga iray izay noresahina teo amin'ny teny fampidirana ny toko ity (Wesolowski et al. 2014) . Amin'ny toe-javatra izany, dia afaka sary an-tsaina toe-javatra roa samy hafa:
Na dia amin'ny toe-javatra roa ireo antontan-kevitra ireo miantso mikoriana avy ao amin'ny orinasa, ny fampahafantarana ireo fepetra momba ireo toe-javatra roa tsy mitovy noho ny fahasamihafana eo amin'ny mpilalao, sy ny toetrany, ary ny fampitana fitsipika tafiditra. Mifantoka amin'ny iray ihany ireo dia afaka mitarika ny masontsivana loatra fanapahan-kevitra tsotra. Raha ny marina, Nissenbaum (2015) dia manamafy mba tsy ho masontsivana telo azo nihena ho ny hafa, ary tsy mety hisy iray amin'izy ireo isam-batan'olona mamaritra fampahafantarana fenitra. Izany telo dimensions toetra ny fampahafantarana fenitra manazava ny antony mahatonga lasa ezaka-izay nifantoka tamin'ny toetra na ny fampitana na fitsipika-ho tsy mahomby amin'ny fakàna fahatsapana mahazatra-hevitra ny fiainana manokana.
Olana iray amin'ny fampiasana ny hevitra ny teny manodidina-havana fampahafantarana fenitra mba hitarika fanapahan-kevitra dia hoe mpikaroka mba tsy mahalala azy mialoha ny fotoana ary dia tena sarotra refesina (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) . Ankoatra izany, na dia mety mifanohitra fikarohana contextual-havana fampahafantarana fenitra izay tsy voatery midika akory fa ny fikarohana tsy tokony hitranga. Raha ny marina, Chapter 8 ny Nissenbaum (2010) no tanteraka ny "Ny fandikana Manaiky ny Tsara." Na dia eo aza izany fahasarotana, teny manodidina-havana fampahafantarana fenitra dia mbola tena mahasoa fomba hisaintsaina momba ny fanontaniana mifandray amin'ny fiainany manokana.
Farany, fiainana manokana dia faritra izay efa nahita maro tsy fifankazahoan-kevitra eo amin'ny mpikaroka izay laharam-pahamehana fanajana ny olona sy izay laharam-pahamehana Beneficence. Sary an-tsaina ny raharaha ny fahasalamam-bahoaka mpikaroka izay naka mangingina ny olona mijery ranonorana, satria ny fahadiovana dia fanalahidin'ny fahatakarana ny fisorohana ny fihanaky ny areti-mifindra ny tantara foronina. Mpikaroka mifantoka amin'ny Beneficence dia hifantoka amin'ny soa ny fiaraha-monina avy amin'izany fikarohana sy ny mety mihitsy aza milaza fa tsy misy ratsy ny mpandray anjara raha toa ka ny mpikaroka manao ny fitsikilovana tsy ho tratra. Etsy an-danin'izany, mpikaroka izay laharam-pahamehana Ny fanajana ny olona dia mifantoka amin'ny zava-misy fa ny mpikaroka no tsy mitondra ny olona amim-panajana ary raha ny marina manao azy ireo loza tamin'ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana. Indrisy anefa, fa tsy mora ny hamaha ny mifanohitra fomba fijery io toe-javatra (na dia ny vahaolana tsara indrindra amin'ity tranga ity dia mety ho ny mangataka fotsiny ny fanekena).
Ho famaranana, rehefa niady hevitra momba ny fiainana manokana, dia manampy ny hifindra any an-dafin'ny loatra tsotra bahoaka / miankina Fisampan-droa sy ny lahatra fa tsy momba ny teny manodidina-havana fampahafantarana fenitra, izay vita amin'ny telo zavatra: mpilalao (foto-kevitra, mpandefa, mpandray), toetra (karazana vaovao), ary ny fifindran'ny fitsipika (faneren'ny ambany izay vaovao mivoaka) (Nissenbaum 2010) . Misy mpikaroka handinika ny fiainany manokana eo amin'ny lafiny ratsy izay mety vokatry ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana, ny mpikaroka hafa kosa mihevitra ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana ho toy ny loza sy ho azy. Satria hevitra ny fiainana manokana maro nomerika rafitra no miova rehefa mandeha ny fotoana, tsy mitovy amin'ny olona ny olona, ​​ary mitovy amin'ny toe-javatra ny toe-javatra (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) , fiainana manokana no mety ho loharanom-sarotra etika fanapahan-kevitra ho an'ny mpikaroka ho an'ny sasany fotoana.